သောက်သုံးတော် ပုလင်း ကိုလ ..အောက်ဆုံးမှာရယ် နောက်ဆုံးမှာ မထားရဘာဘု ..အိုဘယ့် .. မောင်ဖားမှာလည်း အသီး နဲ့ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သောက်သုံးတော် ပုလင်း ကိုလ ..အောက်ဆုံးမှာရယ် နောက်ဆုံးမှာ မထားရဘာဘု ..အိုဘယ့် .. မောင်ဖားမှာလည်း အသီး နဲ့ပါ
Posted by ムラカミ on Apr 22, 2014 in Aha! Jokes, Satire, Members, Society & Lifestyle | 34 comments
အဲ … ဂလိုဆိုတော့ ….
ဟဲ့မယ်ဂိ …ညည်းရေးဇာမစိ ၀ူးလား လို့..
ခေါင်းမော့ မေးငေါ့ လတ္တံ့သော .. ဖေ့စဘုတ်တော် ပေါ်မှ .. မှတ်မှတ်ထင်ထင် များ ဖြစ်သည့် ရွာ့ဇဗျစ်သီး တဖြစ်လဲ..
သင်္ဘောနှစ် မှ အခြစ် ထင်သည့် ပုလင်းဖင် မှန်ဝိုင်းတပ် သင်္ဘောသီး ကတော် အားလည်းကောင်း
ကျော့်ကို ပြူးအောင် ရိုက်ပေးပါ ဆိုတတ်သည့် … ထွာဘယ်မိတ်ကာ ကိုကိုစော အားလည်းကောင်း..
ကြာဇံမွေး ဆံထုံးချည် ..ပြုံးရီသည့်အခါ ပြီတီတီ ဖြစ်နေတတ်သည့် ထိုင်နေအကောင်းဟ ..ထသွားမှ ၀-မှန်းသိသည့် .. အိုးယက်စ် မမအားလည်းကောင်း..
မိုးလင်းတိုင်း ပလာတာဗျင်းရမှ နေသာထိုင်သာရှိသည့် သီဟပူရ ဘာဂါကွင်း အား လည်းကောင်း..
ဗမာပြည်လက်ရွေးဇင် ဘတ်စကတ်ဘော ချံပလုံဟောင်း ဟိုမမအား လည်းကောင်း (အခုတော့ သူ့နာမည်က အမြီးလေးယား တယ်ဆိုလား)
ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှု အတွက် တာဝန်မကင်းရှာသော ..ဟို ကပ္ပလီကြီးအားလည်းကောင်း (သဂျီးပြောတော့ ကမ္ဘာပူလာတာ နှင်းတောင်တွေ အရေပျော်လို့ ရှို. ..)
သူ့ ဖွားဘက်တော်.. (အဲ့လေ ရှုပ်ကုန်ဘီ) ..ညီအစ်ကိုတော်..ဖြစ်သည့် ရိုက်လိုက်ပါအုံး မားရယ်. .. စကားရပ်အိ မူလဘူတ ပိုင်ရှင်..ရိုးမတခြမ်း ဘူဒိုဇာအစွမ်းထိထားသည့် မားဆွေအား လည်းကောင်း..
ခေါင်းမှာ သံခမောက် ချိုပေါက်မှ သောက်မယ်.. အဲ့လေ.. ကြောက်မယ် ဟူသော တောင်လှေကား နှင့် တွံတေးအရပ်မှ လက်ဝှေ့ကျော် ၂ဦးအား လည်းကောင်း
အခင်းအကျင်း တူလျင် ..ပုလင်း အတင်းယူမယ် ဆိုသော … မတ်-စည်-ဂ-ကမ်း တို့အား လည်းကောင်း..
မိဘမွေးထားသည့် ဆံပင် ကိုပင် အေးအေးမနေရ ….. ဇင်လေးအတွက်ဆို ဇဘင်လေးပါ ဖြောင့် ပေးရပေးရဆိုသည့် …ပိုးထိုးလောက်တက် ပန်းသီးပိတ်သတ်ကြီးအား လည်းကောင်း
စိန နှင့် ကေအင်ယူ ကို အမုန်းဂျီးမုန်းနေသည့် အူးလေး ကြောင် (ခေတ္တ-ချိန်ပါ-ရာမ ) အား လည်းကောင်း..။
ခုတလော အဆဲမခံဖို့ရာပင် မအားလပ်ရှာသည့် … တောင်ကျွန်း ၀ိဇ္ဇာနှင့် …အဆဲ ချံပျံ ဘန်ဂေါက်ပု အား လည်းကောင်း …။
အ၀င်တခါ အထွက်တခါ အစွမ်းပြတတ်သည့် … အောင်သိမ်းလင်းနှင့် တူချင်သော ဒညက်ဝင်း အားလည်းကောင်း…။
ကွမ်းစားပီးတစ်သည့် တခမ်းမွေး ပိုင်ရှင် သဂျီး နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ချစ်သွေးကြွ တခမ်းမွေးပိုင်ရှင် ကွင် ရှူလုံး အားလည်းကောင်း …။
ခုစာကို ခုနေရာထိ ..ဆာလုံးဗောင်း ဘယ်နှလုံး မှားသွားဗီဒီး ဟု ကောင့်ဒေါင်း လုပ်နေလေသတတ်သော မား-မာ အမွှာ အား လည်းကောင်း…။
သားတော်မောင် အတွက် ဂျော်မေထွီ သင်သည့်အခါ ခေါ်ပြရန် ရည်စူးထားသော ကုဗတုံး နှင့် ဂေါ်လီလုံး အတွဲ အား လည်းကောင်း….။
သွားလေသူ နှူးဘာဂိုဏ်းသားများနှင့်တကွ. .. ကျဆုံးလေပြီးသော ရွာသူားများ အားလည်းကောင်း ….
(အရင်က ရွာ … အခု ကျူးကျော်… အဲ့လေ မြို့ ..ဆိုလား ..)
ကျော် ဘာရေး ရကောင်းမည်နည်း ဟူ၍သာ ဗျို့ …ဟစ်လိုက်ချင်တော့ပါသည်…။။
ဟီဟိ.. ဒချိ ဒချိ…
နာ့ မောင်ဂလေးကို လွမ်းလို့ပါ။
ညည်း အကြောင်း လွမ်းတော်မူလို့ စာစီရမလားလို့ တွေးထားပါတယ်။
နာ့ ပလာတာမဗျင်းရတာလဲ ကြာပါပြီအေ။
(နာ့ ပလာတာမဗျင်းရတာလဲ ကြာပါပြီအေ။)
မဟုတ်မဟတ်တွေပြောပါနဲ့ အေရယ်..ညည်းလုပ်တာနဲ့ တို့ ညီမဒေကို ..သငယ်တွေ အထင်သေးတော့မှာဘဲ..
သူလုပ်တာ..ပလာတာ နဲ့ ကြက်သား လာပို့ထားတာလေး ..စားရမှာတောင် တွန့်သွားဘီ….
အာ့ ဘာ အဒိတ်ပဲတုန်းဟမ်?
တကယ် စားတဲ့ ပလာတာ ဟုတ်ဘူးလားးး
Oh …. Yes. …..!!
အဂုလို စာလေးပါလေးတက်တက်ရေးပါအုံး မားရိုစီရယ်
နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုပါတယ် ခင်ဗျ…။
ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဂိုးတွေ တစ်ဒိုင်းဒိုင်း သွင်းဖို့
နာက ၆နှစ်ဆိုလို့သနားနေတာ… အထဲမှာ အင်တာနက်သုံးခွင့်ပေးတယ်လာ…
ရေမီးအစုံနဲ့ လေထီးခုန်ပါပေ့ဂျာ …
အနည်းဆုံးတော့..(.. ချဲနံပါတ်တွေ.. ပေါက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့… ) နတ်ကတော်.. ဘိုးတော်.. ဘုန်းဘုန်းတော်တွေ..( အခုထိမတွေ့သေးတဲ့..) မလေးလေယဉ်ကို… သတင်းအစွန်းလေးလောက်ကမ္ဘာသိအောင်.. မရွှီးပေးနိုင်တာကို..
မြန်မာတွေဘာ့ကြောင့်ဘယ်လို.. ဘ၀အပ်ပြီးယုံကြတယ်… ဆိ်ုတာမျိုး… ရီဆပ်ခ်ျလုပ်တာမျိုး..
အန်ထွာပရက်ညာ ကို သတ်ဖို့ လုပ်ထားတဲ့ အခင်းအကျင်းပါဗျာ …
အူးလေးလည်း သိပါတယ် …
တခါတခါကျ ရီစရာကောင်းပြန်သဗျ. …
မရေးဘူး …ဘာကြောင့်တုန်းဆို ..
အတိတ်က သောက ဟာ … အချိန်အတွက် ဟာသ ဖြစ်တာကိုး …
ဟာသ ကိုပဲ စောင့်ကြစို့ ….
(ဆာလုံးဗောင်း ဘယ်နှလုံး မှားသွားဗီဒီး ဟု ကောင့်ဒေါင်း လုပ်နေလေသတတ်သော…)
သင်္ကြန်တရားစခန်းဝင်ပြီး သူတော်ကောင်းတရားတွေ ပွားများလာတာ….
သူ့အသက်လည်း မသတ်ပဲ အမြဲရှောင်ကြဉ်မည်… ဆိုသလို
စာလုံးပေါင်းများလည်း ၀င်စစ်ဆဲ အမြဲအပြစ်ရှာပါမည်။
စာလုံးပေါင်းများလည်း ကိုယ်တိုင်ပဲ မမှားရအောင် ကြိုးစားမည်။
(အခင်းအကျင်း တူလျင် ..ပုလင်း အတင်းယူမယ် ဆိုသော … မတ်-စည်-ဂ-ကမ်း တို့အား လည်းကောင်း..)
ဒဲ့ နာ့မြန်းတည့်ပြောနေဒလား မိဂိ။ ဘာပဲဖစ်ဖစ်ရီလိုက်ရတာ ကျေးဇူးပါအေ။ အိုက်လိုလုပ်ပါဟယ်။ ရွာထဲနေစမ်းပါ။ ရွာရိုးကိုးပေါက်လျှောက်မနေဘာနဲ့ဟယ်။
အောင်ရဲလင်းတောင် ကျနော့်လောက် အောင်ရဲလင်းနဲ့ တူလို့လား
.. မောင်ဖားမှာလည်း အသီး နဲ့ပါ …ဆိုပြန်ပါရော့လား…
နိ အသီးတွေကလဲ ခဏခဏကွဲ ကုန်ဘဲကုန်နိုင်ပါလားဟယ်…
အလိုလေး…မောင်မင်းကြီးသား ရယ်…လာစမ်းပါအုံးဗျာ..ဒီအထပ်20 ရွှေရင့်ဆို့တောင်ဘက်များရောက်ခဲ့ရင် ….ဖက်တီးမကြီးအကြောင်း ဖောင်းထုချင်လို့ …အဟိဟိ … ( ကိုယ်ပိုင်ထွာဘယ် ထောင်ပြီး ချမ်းသာတဲ့နေ့ … မျက်လုံးပြူးအောင် ကိုရီးယားသွားခွဲပစ်မီ )
သားတော်မောင် အတွက် ဂျော်မေထွီ သင်သည့်အခါ ..
ခေါ်ပြရုံတင် ပြဘာနော့ …
ခေါက်တာတွေ ပြုတာတွေတော့ လုပ်နဲ့စရာ့ …
ကိုကြီး​ကျော်​နတ်​ကနားထင်​လို့ ၀င်​စပ်​စုတာ။ ဖာပြုပ်​​ရေနစ်​​နေတာကိုး။
ဘာ ဖားပြုတ်ရေနစ် တုန်း …
ကွ ကိုယ် အေးအေးဆေးဆေး … ကျုပ်အူးလေး အငယ်ဆုံး လက်ရာ ..ပါးပေါ်က အချိုင့်ကြီး ၂ခုပဲ ပျောက်အောင် ဆေးထည့်နေဘာဗျာ..
ပုလင်းဆိုတာ ​သောက်​ဖို့ လွယ်​​အောင်​အ​ပေါ်ယံတင်​ထားရတာမျိုးပ ဘယ်​​အောက်​ဆုံးသွားထားလို့ဖြစ်​​လေမလဲ​နော့ အို မြို့ပိုင်​မင်းကို စကားအတင်းစ
ပ်​ ချဲနံပါတ်​ တစ်​လုံးလွဲ​ပေးတတ်​​​လေ​သော ဘိုး​ဒေါ် / ဘုန်းဘုန်း မ​လေး​လေယာဉ်​​ပျောက်​ကို ကဘာက အံ့ဘနမ်းဖြစ်​​အောင်​မရွှီးတတ်​​လေ​သော ​ဘေဒင်​ဆြာများ နပ်​​​ရေစင်​ဖိုး ​ချွေးခံအိတ်​ထဲ ထည့်​ဘုန်းသွားတဲ့ နပ်​က​တော်​မှ ယုံကြည်​တတ်​ကြ​လေ​သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်​တို့အား ယ​နေ့မှစ၍ ဗြဟ္မဏ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်​များ ဟူ၍ အမည်​​ပေးကင်​ပွန်းတပ်​အပ်​ပါ​ကြောင်း သ​ဘောမတူသူများ​လေဖြတ်​နိုင်​ပါ​ကြောင်း ဤစကားလုံးအား မြို့ပိုင်​မင်းထံ ​ရေစစ်​စကျီ လုပ်​ပါ​ကြောင်း ဒူဒူ ဒူ
ရောက်လာလို့ ကျေးကျေးပါ အဘနီ …
ဆြာမင်းလူ ရေးတဲ့အထဲ .. သူ့ဘစ်ဘရားသား ..ကားနဲ့ နယ်ဝေးထွက်တဲ့အခါ ..ကားဝိုင်ပါ ခွက်ထဲ ..အရည်ထည့်လို့ ..ပိုက်နဲ့ စုပ်ရင်းမောင်းတဲ့အကြောင်းလေး သွားသတိရတယ်…
မြို့အုပ်မင်းကတော့ဗျာ …သူ့ ၀သီအတိုင်း တယ် စပ်စုတာကလား …အာဟိ..
ပိဋိကတ်၃ပုံ( ၀ိနည်း၊ သုတ္တန်၊ အဘိဓမ္မာ)ထဲ.. ၂ပုံပဲ.. ဘုရားဟောတိုက်ရိုက်ယူဆလို့ရပြီး.. အဲဒီထဲ.. သုတ္တန်မှာ.. တရားကွက်တိုင်း.. အဖွင့်နိဌာန်း-စာကိုယ်-နိဂုံး အရကောက်… စာကိုယ်ပဲရွေးရင်တောင်.. ၃ပုံ၁ပုံသာဘုရားဟောဖြစ်နေတာမို့…
မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်ထဲ.. လောလောလတ်လတ်ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းထားလို့ရတဲ့.. မြန်မာ့စာပေအတွေက်သေလောက်အောင်အရေးကြီးတဲ့.. စောလူးမင်းကျောက်စာပါ.. စာရေးထိုးတာရဲ့သက္ကရာဇ်တောင်.. မီဒီယာတွေ စာရွက်ပေါ်တင်..ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြတာမှာ.. မီဒီယာ၃ခု… ၃မျိုးကွဲထွက်နေတာမို့..
ထေရာကြီးများရဲ့.. နှုတ်ကပါတ်တော်သာအမှန်ယူဆ.. ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့..သူများဖြစ်တာမို့……
မှတ်ချက်။ ။ ဤစကားဖြင့်..ကိုရင်နေရဲ့ ရေစစ္စစရီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို.. ပယ်ဖျက်သည်။ :buu:
ခုလို ပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာမဆုံးနိုင်ပေ။
အဲသလို သီချင်းလေးများ ဆိုရမလားလို့ပါ။
ကျနော် ရှိပါတယ် … ပိုစ့်သာ မတင်ဖြစ်တာ ..
ဟိုလူ့နောက်လိုက် သည်လူ့စလိုက် ..
အဆိပ်ကတော့ ….အင်း …
ခုတလော လောကဓံ အတော် ခံရတယ်ဗျာ …
ကိုယ်မလုပ်သမျှ ပြသနာ အားလုံးအတွက်
ကိုယ့်ကို လာအုံးစားနေမှုတွေ တပြုံတခေါင်းပေါ့ …
ပြောရရင် ဘယ် ရှုထောင့်မှ မလွတ်ဘူး
အချိန်တန်တော့လည်း ပြီးတာက ပြီးသွားတာပါပဲဗျာ…
ဆိုတော့ သည်အကြောင်းတွေ သည်သောကတွေလည်း ဟာသ လုပ်ရယ်မောရမယ့်အချိန် ကျမှ ရေးပါအုံးမယ်ဗျာ
သောက်သုံးတော် ပုလင်း ကိုလ ..အောက်ဆုံးမှာရယ် နောက်ဆုံးမှာ မထားရဘာဘု ..အိုဘယ့် .. မောင်ဖားမှာလည်း “အမြည်း” နဲ့ပါ…
” ခုတလော အဆဲမခံဖို့ရာပင် မအားလပ်ရှာသည့် … တောင်ကျွန်း ၀ိဇ္ဇာ ”
ဟဲ ဟဲ ။ တောင်ကျွန်း အဘ က ရှိပါတယ်ကွယ် ။
အမေရိက နှင့် ကနေဒါ ခရီးစဉ် မစခင်မှာ ၊
နယူးဇီလန် ခရီးစဉ် Post တွေကို အပြီးဖြတ်နေရလို့ ၊
အဆဲခံရမယ့် Post လေးတွေဖက် မလှည့်နိုင်သေးတာပါ ။
ကိုရင် Rossi သာ ခုတလော အသီးကွဲပြီး ပျောက်နေတာပါ ။
ငါတို့ စကားဒေ ..စာသားဒေ ခိုးခံနေရတာ ကြာပြီ မလား..အရှေံတောင်အာရှတို့ ..ခင်ခက်ခက် တို့…
တနေ့က လည်း ရဲအောင် ပုန်းထားတဲ့ ဗီဒီယို ထဲ မှာ..ငါတို့ ရဲ့ ရိုက်လိုက်ပါဦး..မသွားပြီ..ခွီးတဲ့မှဘဲ..
နင့်အဖျစ်က စိုးလှဂျီလား မောင်ဖားရယ်… နင်တေဒဲ့အခါ ဂါးနဲ့ငါ တျောက်ခါးတျောက်ဖက်လို့ နင့်နောက်စုန်းခွီးကို လိုက်ပို့ဖို့ ဒီနေရာဂ ကဒိပြုဗာဒယ်ကွာစ်….
ကြောင်ကြီးပြောတာနဲ့ပဲ ဖားသက်ပြင်း မသေ၀ံ့တော့ဘူး။